Mogadishu Journal » Man Utd iyo Liverpool waa inay Sterling ka badbaadiyaan cidlada Man City – Ferdinand
Manchester United iyo Liverpool ayuu Rio Ferdinand ku booriyay inay ka fikiraan badbaadinta Raheem Sterling oo ah “lamadegaanka” Manchester City.
Sterling ayaa qeyb weyn ka qaatay inuu ka caawiyo City inay ku guuleysato seddex horyaal oo Premier League ah tan iyo markii uu ka yimid Liverpool sannadkii 2015, laakiin waqtigiisii ​​ciyaarta ayaa hoos u dhacay xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, oo ka soo daahay tababarka isku diyaarinta xilli ciyaareedka ka dib markii uu la gaaray xulkiisa finalka Euro 2020, ayaa ku soo bilowday labo ka mid ah lixdii kulan ee City xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan.
Waxaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Etihad Stadium inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka dhow xilli kooxda Pep Guardiola ay isku dayaysay inay weeraryahan Harry Kane ka keento Tottenham.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso inay Sterling amaah kula soo saxiixato bisha Janaayo, dhanka kale kooxda kale ee LaLiga ee Real Madrid ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay inay xiiseyneyso.
Halyeeyga weyn ee Man United Ferdinand ayaan hubin sababta Guardiola uusan u isticmaalin Sterling inta badan waqti dambe wuxuuna rumeysan yahay in 26 jirkaan uu heli doono dad badan oo damacsan inuu sugo haddii xaaladiisa aysan hagaagin.
“Aaway Raheem Sterling? Kalsoonidii way ka luntay maxaa yeelay waxaa laga saaray kooxda,” ayuu Ferdinand ku sheegay kanaalkiisa SHIVE ee YouTube.
“Wuxuu ahaa nin u tagi kara marka ay u baahan yihiin gool, sanado aad u badan, haddana si lama filaan ah wuxuu ku jiraa cidlada, waan la yaabay, ma fahmin.
“Markay tahay Pep, wuxuu si sax ah wax u hagaajiyaa marar badan, laakiin midkaan waa inay jiraan kooxo halkaas fadhiya oo tagaya, 'Aan aragno sida ay tani u socoto maxaa yeelay waxaan qaadan lahaa Sterling maalinta oo dhan!'
"Haddii aan ahay Liverpool, waxaan iibsan lahaa Sterling berri ... Haddii aan isaga ahay, hadda uma aadi doono Barcelona ama Real Madrid, waana sababta aan u idhi Liverpool, Man United ayaa qaadan doonta!"
Sterling ayaa ku dhammeystay gooldhaliyaha ugu sarreeya City ee Premier League laba xilli ciyaareed ka hor isagoo dhaliyay 20 gool 33 kulan oo uu saftay, halka 10kii gool ee uu dhaliyay xilli ciyaareedkii hore uu ka fiicnaa kaliya Ilkay Gundogan (13).
Tan iyo ololihii ugu horreeyay ee Guardiola ee City 2016-17, Sterling wuxuu si toos ah ugu lug lahaa 160 gool tartammada oo dhan - 104 gool ayuu iska dhaliyay iyo 56 caawin.
Ma jiro ciyaaryahan City ah oo si toos ah uga qeyb qaatay goolal badan mudadaas, halka kaliya 14 kale oo ka tirsan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub ay ka fiicnaan karaan soo laabashadaas, iyadoo Lionel Messi (309) uu hogaaminayo.
Weeraryahankii hore ee Liverpool Sterling ayaa ciyaaray kaliya 265 daqiiqo illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, si kastaba ha ahaatee, kaliya labo kulan oo uu ku soo bilowday ayaa yimid labadii kulan ee City ay ku guuldareysatay inay gool ka dhaliso, Tottenham iyo Southampton.
(Sawirro) Danjire Cali Cagabaruur oo la kulmay Gudoomiyaha Baarlamaanka Uganda